UMohammed Anas ubagile igoda Abafana Bes'thende koweligi eSugar Ray - Impempe
UMohammed Anas ubagile igoda Abafana Bes’thende koweligi eSugar Ray
February 23, 2021 February 23, 2021 Impempe.com
UMohammed Anas weBlack Leopards ejabulela elinye lamagoli akhe nozakwabo
UMohammed Anas weBlack Leopards uqede nya ngerekhodi lokungashaywa ekhaya leLamontville Golden Arrows eshaya amagoli amabili emdlalweni weDStv Premiership, eSugar Ray Xulu Stadium, eClermont, ngoLwesibili ntambama.
Kulo mdlalo ogcine uphele ngo 2-1 kucace zisuka ukuthi iLeopards ibifuna amaphuzu aphelele ukuze isuke emsileni. I-Arrows ibilandela izithunzi, ingafuni kuyinika thuba iLeopards.
Umdlalo ubukeke uvuna iLeopards emizuzwini yokuqala. Leli qembu laseLimpopo yilona ebeliyinyathela kangcono, abadlali balo betholana kalula, bedabula isisu se-Arrows. Lokhu kuholele ekutheni iLeoapards ithole ifree kick ngomzuzu wesithupha, eqhathe unozinti we-Arrows uSifiso Mlungwana nokaputeni wakhe uNkosinathi Sibisi.
UMlungwana ubezama ukuxhimfa ibhola kodwa isibhakela sakhe saphelela ebusweni bukaSibisi. Lokhu kuholele ekutheni ashintshwe uSibisi ngomzuzu ka-15, indawo yakhe yathathwa nguGladwin Shitolo, othathe nebhande likakaputeni.
ILeopards iqhubekile nokuhlupha, ithola izikhala ikakhulukazi esiswini se-Arrows. Ngomzuzu ka-32 ligcine libhobekile ithumba u-Anas eshaya igoli, zahamba phambili izivakashi. Uqedele ibhola ebelidonswe uLifa Hlongwane lase lishaya epalini labuyela enkundleni, u-Anas walingqofela phakathi ngekhanda.
Uphinde wabuya u-Anas ngomzuzu ka-37 washaya igoli eliphikiwe kwathiwa ubeseme emhlabeni ongamfanele.
Ibhola ebelingcono ngesiwombe sokuqala le-Arrows, elikaVelemseni Ndwandwe azame ukulishaya ngesithende kodwa walibona uKing Ndlovu ezintini zeLeopards.
Ngesiwombe sesibili i-Arrows ibuye seyingcono kakhulu kuyiyona ebisibonana, ikhombisa ukuthi ayifuni ukuhlulelwa ekhaya. Nokho igoli lokulinganisa lize laqhamuka ngomzuzu ka-68, kuyisithende esishaywe nguMichael Gumede wangasibona uNdlovu, kwaba ngu 1-1.
Ngomzuzu ka-74 uPule Mmodi we-Arrows, uthole ikhadi elibomvu ngemuva kokudlalisa kabi uTumelo Khutlang. Lo mdlali (uKhutlang) kudingeke ukuthi aphume indawo yakhe yathathwa nguTiklas Thutlwa. Lokhu bekuchaza ukuthi umqeqeshi we-Arrows uMandla Ncikazi bekumele ahlele iqembu lakhe kabusha.
Ngemuva kwekhadi elibomvu iLeopards ibibukeka ikholwa ukuthi ingalithola igoli lokuwina, ihlasela. ILeopards ifake u-Ovidy Karuru yacindezeleka kakhulu i-Arrows emizuzwini yokugcina. U-Anas ushaye intuthu yegoli ngomzuzu ka-90 kwaphela kanjalo ngerekhodi lokungashaywa ekhaya kwi-Arrows. Ukuwina kweLeopards kuyisusile emsileni.
Previous Previous post: ILeopards izosebenzisa isinongo sikaPapic ukuphoxa i-Arrows
Next Next post: Ilahlwe yinhlanhla iChiefs iphikelwa igoli koweCAF